Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Nin Muslim ah oo Faransiiska ku dilay Baadari oo la diiday in la aaso iyo Sababta ka Dambeysa
August 22 2017 00:47:40
Nin Muslim ah oo Faransiiska ku dilay Baadari oo la diiday in la aaso iyo Sababta ka Dambeysa
Ururada Muslimiinta ee dalka Faransiiska , ayaa diiday in ay aasaan Nin Muslim ah oo dalkaasi ku dilay Oday Baadari ahaa, waxaana wali Meydka ninkan oo taageero u ahaa Ururka Daacish gacanta ku haya Dowlada Faransiiska.
Muslimiinta Faransiiska ayaa sheegay in aysan sida Muslimiinta u aaseyn Abdel malik Pettitj, oo ahaa ninkii ka dambeeyay Oday Baadari 86-sano jir ah oo lagu dhax dilay gudaha Kaniisad uu ka maamulayay magaalo kutaala Faransiiska.
Dhinaca kale Urur ay leeyihiin Muslimiinta kunool dalka Denmark ayaa sheegay in iyagu diyaar u yihiin in ay aasaan Meydka Abdel malik Pettitj, oo laga diiday in lagu aaso dalka Faransiiska uu dilka uu ka geestay.
Siyaasiyiin katirsan Xisbiyada dalka Denmark, ayaa si kulul u canbareeyay warkan kasoo yeeray Muslimiinta Denmark, waxa ayna sheegeen Siyaasiyiinta in dalkooda uusan aheyn qabuuro lagu aaso dadka Argagaxisada ah.
Dalka Faransiiska ayaa ahorey waxaa loogu aasay rag lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen Ururka Daacish kuwa aoo weeraro qasaaro badan dhaliyay ka geestay gudaha dalkaasi,lamana oga sababta ninkan Baadariga dilay u diideen Muslimiinta Faraniiska in ay aasaan.